Pamwe Hausati Wakanaka Pane Izvi | Martech Zone
Chishanu, December 3, 2010 Chipiri, Gunyana 14, 2014 Douglas Karr
Nguva imwe neimwe mune imwe nguva unokomborerwa nemunhu anotora nguva yekutenda iwe mushure mekuita hurukuro. Ndinoseka nevanhu vanondiudza kuti chikamu chakakura sei nekuvaita kuti vazive kuti handina kumbobvira ndagona kutamba ballet. Iyo inogara ichiwana kuseka, asi pane nyaya kumashure kwayo.
Ini ndinonyatsoda kutamba.
Amai vangu vakandiita kuti nditore tapu uye jazi zvidzidzo zveakawanda ehudiki hwangu. Neraki, ndakakwanisa kuviga icho chokwadi kubva kushamwari dzangu zhinji. Ndakaendawo kuchikoro maguta maviri pamusoro peiyo studio saka handina kumbobvira ndanetseka nezvemumwe munhu anoratidza kukosheswa uye achindiziva mune yangu sequin vest uye patent yeganda matepi shangu.
Shuva, svetuka, nhanho.
Dzokera kune iyo poindi. Vamwe vanhu havasi kugona kutamba. Mwanakomana wangu, semuenzaniso, ane rwiyo runoshamisa. Anoridza toni yezviridzwa uye anosanganisa mimhanzi inonzwika zvisingaite. Asi mumuise padhaniki pasi uye anotaridza senge peacock ine gumbo rakamonerwa achibatwa. (Ndine urombo Bill, ndichiri kukuda!) Rombo rakanaka kwatiri tese, kusanganisira nemusikana wake akanaka, ane hunyanzvi pamasvomhu. Iye chaizvo, akanaka pamasvomhu.
Ok… heino pfungwa. Vamwe vanhu vanoyamwa paTwitter, vamwe vanoyamwa paFacebook uye kunyangwe kuyamwa pakublogi. Regedza kuyedza kuvaita kuti vaite izvo zvavasingazombofi vakagona. Mamwe makambani ari muchikepe chimwe chete. Ivo havana kunaka pazviri ... ivo havazombofi vanove vanokwanisa pazviri. Reka kuyedza kutaura navo mazviri. Regai varambe vachiita izvo zvavanogona chaizvo.
Ini handina kugona kutamba.
Muchokwadi, ini handina kumboedza ballet. Uye, rombo rakanaka kwandiri, hausi kuzoita kuti ndiedze. Kana iwe uchiyamwa paTwitter, shandisa nguva yako kumwe kunhu. Kana iwe ukayamwa paFacebook, rega kuvhara matumba evanhu nemakwikwi erudzii rwemhuka yezu yaunotaridzika. Kana iwe uchiyamwa pablogging, enda unotsvaga mumwe munhu anozvigona uye ita kuti vanyore zvirimo.
Darika, svetuka, et great plié.
Pamwe iwe hausi kungoita zvakanaka pane izvi zvemagariro media Zvakanaka, ndine chokwadi kuti unokwanisa pane chimwe chinhu. Kana iwe wakapa pasocial media yako yakanakisa kupfura uye iwe usiri kuenda chero kupi, enda uite izvo panzvimbo.
Tags: balletBlogBloggingmatambirokutambaevanhu vezvenhau